Isitudiyo esihle se tattoo: iingcebiso malunga nokukhetha | Ukuzoba
Isitudiyo esihle se tattoo: iingcebiso zokukhetha
Nat Cherry | | Amagcisa eTattoo
Kungenzeka ukuba, ukuba yi- okokuqala uza kufumana umvambo, zibuze ukuba yeyiphi eyona ndlela onokukhetha ngayo buen studio se tattoo. Ekuboneni kuqala, kubonakala ngathi ngokubonisana nomphakathi Siza kwanela, kodwa siza kuphonononga ngakumbi kulo mbandela, kuba sisigqibo esibalulekileyo esingayi kuxhomekeka kuphela kwinto enye.
Ke makhe sijonge ezimbalwa iingcebiso kwindlela yokukhetha studio esihle se tattoo.
1 Yenza isigqibo ngento oyifunayo
2 Jonga iinethiwekhi zentlalo kunye nezimvo ezivela kwi-intanethi kunye nabantu bokwenyani
3 Musa ukukhokelwa kuphela ngexabiso: khetha umgangatho kunye nococeko
Yenza isigqibo ngento oyifunayo
Kubonakala kusisihiba, kodwa yenye yezinto zokuqala ekufuneka uzenzile sigqibo xa ukhetha studio esihle se tattoo Kukuthatha isigqibo sokuba luhlobo luni tattoo ufuna. Ngokucacileyo, ngokuqinisekileyo into elula iya kwenziwa naphina, kodwa ukuba ufuna uyilo into ethe ngqo ngakumbi okanye a isitayela Ngokukodwa (ngokwesiko, ngokuhlekisa, ngokwenyani ...) kuyacetyiswa ukuba wazise nge amagcisa okanye izitudiyo egxile kwi uhlobo lwe tattoo Ufuna ntoni ukuze iziphumo zokugqibela, ukuba kunokwenzeka, zibe ngaphezulu Kuhle.
Jonga iinethiwekhi zentlalo kunye nezimvo ezivela kwi-intanethi kunye nabantu bokwenyani
Nje ukuba ukhethe ifayile ye tattoo, jonga kwi-Intanethi izifundo ezinokwenzeka okanye amagcisa kwindawo yakho. Jonga izimvo zomsebenzisi kwaye ubone iifoto ezixhonywe kuzo nomphakathi ukugqiba ngokuthatha isigqibo sokuba ngaba yile nto uyikhangelayo okanye hayi. Kananjalo unokujonga ukuba ingakanani ixesha elisebenzayo ithatha isifundo (ixesha elide, amava ngakumbi).
Olunye ukhetho kukukhetha studio se tattoo isekwe kwimbono yomntu "wokwenene". Ke unako ukubuza amathandabuzo akho kuqala, jonga msebenzi kwaye uyazi ukuba kufanelekile okanye hayi. Umzekelo, itattoo yam yokugqibela yenziwa kwi studio se tattoo ukuba bendingazi, kodwa ukuba mna bancomela. Ndijongile nge nomphakathi ukuba ndiyithandile eyakhe isitayela kwaye babe nezimvo ezilungileyo ngakumbi kwaye andinakonwaba ngakumbi ngesiphumo.
Musa ukukhokelwa kuphela ngexabiso: khetha umgangatho kunye nococeko
Okokugqibela, sukuvumela ifayile ye- xabiso Isikhokelo kuwe: vumela i umgangatho kunye nococeko. IiTattoos ziyinto ethile caro kuba baya kubakho bonke impilo kwaye bafuna amajelo eendaba abizayo kunye nezixhobo ezifana ne-inki kunye nokulunga Ucoceko. Khetha i studio se tattoo yenze ibonakale icocekile kwaye ithembekile.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuzoba » Iitatoo » Amagcisa eTattoo » Isitudiyo esihle se tattoo: iingcebiso zokukhetha
Iitattoo zentliziyo esandleni, ingqokelela yeembono kunye noyilo
Iitattoos ezithandwayo: zeziphi ezona zidume kakhulu kwi-Instagram?